Nepali Rajneeti | भीम रावलहरुलाई ओलीले लोप्पा ख्वाइदिए पछि माधव मख्ख, खुच्चिङ लगाउँदै यस्तो सम्म भने !
कार्तिक ७, २०७८ आइतबार ९६ पटक हेरिएको
‘…आदेशको पालना गर्‍यो भने स्याबास ! बस्न पाउँछ । आदेशको पालना गरेन भने कति ट्याउँ ट्याउँ गरेको कति ट्याउँ ट्याउँ गरेको १० बुँदेको…’ उनले भने, ‘सुन्नुभएको छैन १० बुँदेको ट्याउँ ट्याउँ । १० बुँदे भन्ने साथीको कस्तो हरिविजोग । छैन कुनै मर्यादा । कुनै सम्मान छैन ।’
भीम रावलले दिएको राजीनामा केही पनि होइन : ओली प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० बुँदे कार्यन्वयन कार्यदलका संयोजक भीम रावलले दिएको राजीनामा केही पनि नभएको जवाफ दिएका छन् ।
उनले भने, ‘उहाँले राजीनामा के को गर्नुभएको हो ? संयोजन मैले सकिन त्यसकरण मेरो राजीनामा भन्नुभयो । त्यत्रो ठूलो कुरो पनि होइन। लिखित पनि होइन, स्वीकार्य पनि होइन, अस्वीकार्य पनि होइन।’
१० बुँदे सहमति कार्यान्वय हुन्छ भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष ओलीले बाँकी केही छन् त्यो हुन्छ भनेर जवाफ दिएका छन् ।
विभाजित पार्टी एकता गर्न बनेको १० बुँदे कार्यदलका संयोजक रावलले अध्यक्ष ओलीलाई यसअघि पटक पटक १० बुँदे अक्षरस सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै आएका थिए । बीचमा ओलीले रावललाई १० बुँदे माग पूरा हुने आश्वासन पनि दिएका थिए ।
तर, पछिल्लो समय ओली १० बुँदे सहमतिप्रति सक्रिय नदेखिएपछि शुक्रबार रावलले संयोजक पदबाट राजीनामा दिएका थिए । यो खबर साभार गरियको हो ।